သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၅-၁၂) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Axiata Group မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ၌ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
အထက်မြန်မာပြည် အနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ
အသက်၁၁နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို မိခင်အရင်းမှ သံချွန်မီးဖုတ်ထိုးခြင်းနှင့် ဆူးခတ်ပေါ်ခုန်ချခိုင်ခြင်းစသည့် လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်မှုဖြစ်ပွား
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့် အမှုမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားရုံးမှ သေဒဏ်ချမှတ်
တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲကို NLD ကိုယ်စားလှယ်များ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
အစိုးရသစ် လက်ထက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်လာဖို့ မျှော်လင့်
ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသန်းရွှေ တွေ့ဆုံ
လူသေအလောင်းတွေ အစုလိုက်မြှုပ်ထားတဲ့ ကျင်းကြီးတွေ ဆင်ဂျာမြို့အနီး တွေ့နေရ
ကယ်လီဖိုးနီးယား ပစ်ခတ်မှု အကြမ်းဖက်ဝါဒ လုပ်ရပ်လို့ FBI ပြော
အစီရင်ခံစာတွေ အစိုးရဖော်ဆောင် မှု မထိရောက်ကြောင်း လူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင် ပြော
ကျွန်အဖြစ်ခိုင်းစေမှု အင်ဒိုနီးရှားရောက် မြန်မာ ၂ ဦးထွက်ဆို
ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol6No 271
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် အင်အား အားကစား ဂျာနယ် အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၃၃
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 87)
Posted: 05 Dec 2015 01:59 AM PST
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Axiata Group မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ၌ လာမည့် ၈ နှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သတင်း ရရှိသည်။ Axiata Group မှ ရာနှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်သော တာဝါတိုင် တည်ဆောက်ရေး ကုမ္ပဏီ edotco က ဒီဂျီစယ်မြန်မာ တာဝါ (Digicel Myanmar Tower) ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ ၇၅
Posted: 05 Dec 2015 02:02 AM PST
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံအနှံ့ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင်ရခဲ့ကြသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ တွေ့ဆုံမှုကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က အောက်မြန်မာပြည် အနိုင် ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီနှင့် မွ
Posted: 05 Dec 2015 01:45 AM PST
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကန်ပြည့်ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ပြည့်ကျေးရွာတွင်အသက်၁၁နှစ်အရွယ် ယောင်္ကျားလေးဖြစ်သော ကလေးငယ်တစ်ဦးကိုမိခင်အရင်းဖြစ်သူကမကြာခဏဆိုသလိုလူမဆန်စွာ နှိပ်စက်မှုဖြစ်ပွားနေကြောင်းအဆိုပါကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအ၀င်ရပ်ရွာသာရေးနာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ ‘’ဒီကလေးက အလွန်သနားစရာကောင်းပါတယ် သူ့ကို ဆူးခတ်တွေအပေါ် ခုန်ချခိုင်းတာ တို့သံကိုမီးဖုတ်ပြီး အသားထဲထိုး
Posted: 05 Dec 2015 12:53 AM PST
<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal0false false false EN-US X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]>
Posted: 05 Dec 2015 12:38 AM PST
Posted: 05 Dec 2015 12:22 AM PST
Posted: 05 Dec 2015 12:20 AM PST
Posted: 05 Dec 2015 01:23 AM PST
Posted: 04 Dec 2015 07:28 PM PST
ပုဂံ နေဝင်ချိန်အလှကို ရှု့စားနေတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်များ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီ အနိုင်ရ လာပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို နိုင်ငံခြား ခရီးသွားတွေ ပိုပြီးလာရောက် လည်ပတ်ကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် မိကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ တဖက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့ လိုအပ်သလို ၊ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ မြန်မာနို
Posted: 04 Dec 2015 07:27 PM PST
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ ဘက်လိုက်လွန်းပြီး - အစီရင်ခံစာ ရေးသားနိုင်ယုံ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တခုဖြစ်တယ်လို့ AHRC လို့ခေါ်တဲ့ အာရှလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူ့အ
ရွှေ့ပြောင်းသူများဟုယူဆရသူများရဲ့ ရုပ်အလောင်းများ မြုပ်နှံထားတဲ့မြေပုံများ။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ အရေး ဖြေရှင်းဖို့ အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်တရပ် ချမှတ်နိုင်ရေး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက လူမှောင်ခို ဂိုဏ်းတွေကို နှိမ်နင်းမှုတွေ စတင် လာရာက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေ အရေး ဒေသတွင်းမှာ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားဖို့ တိုက်တွန်းမှုေ
ဂျာမန်လွှတ်တော်တွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံက IS စစ်သွေးကြွတွေကို ချေမှုန်းရာမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ ပေးအပ်သွားဖို့ ဂျာမနီလွှတ်တော်က တခဲနက် မဲခွဲဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လထဲ ပဲရစ်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံက အကူအညီပေးဖို့ ပန်ကြားချက်ကို တုံ့ပြန်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ IS စစ်သွေးကြွတွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ညွန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့တွေအတွက် ဖရီးဂိ
သောကြာနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီ ဝန်းကျင်က နေပြည်တော် စစ်ဦးစီး ဌာနချုပ် ရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေတို့ သောကြာနေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင် က နေပြည်တော် စစ်ဦးစီး ဌာနချုပ် ရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ မတွေ့ဆုံခင် ရက်ပိုင်း အတွင်းက ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေနဲ့ ပြည်ေ
Posted: 04 Dec 2015 07:26 PM PST
ကိုပါကြီး အမှုမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အနေနဲ့ စစ်ဘက် အရာရှိ တွေ အပါအဝင် တပ်မတော် သား တွေ ကို စစ်ဆေး ခဲ့တယ် လို့ ဆို။ မြန်မာ နိုင်ငံ လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အနေနဲ့ စစ်တပ် နဲ့ ပတ်သက် နေတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆိုရင် လွတ်လပ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု တွေ မပြုလုပ် နိုင် ဘူး ဆိုတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရဲ့ စွပ်စွဲချက် တွေ ကို ကော်မရှင် က ငြင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အောက်တိုဘာ လတု
ဆင်ဂျာ မြို့ကို IS တွေ လက်ထဲ ကနေ လွတ်မြောက် အောင် ကာ့ဒ် လက်နက်ကိုင်တွေ မကြာသေးခင် ကမှ ပြန်လည် တိုက်ခိုက် နိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း က ဆင်ဂျာမြို့ အနီးမှာ လူသေအလောင်း တွေကို စုပေါင်း မြှုပ်ထားတဲ့ ကျင်းကြီး တွေ အရေအတွက် အတော် များများ တွေ့ လာရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ရထားတယ် ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ က ပြောပါတယ်။ ဆင်ဂျာ မြို့ကို IS တွေ လက်ထဲ ကနေ လွတ်မြောက် အောင် ကာ့ဒ် လက်နက်ကိုင်တွေ မြ
Posted: 04 Dec 2015 07:25 PM PST
လင်မယား စုံတွဲ ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း တွေ ရဲ့ လုပ်ရပ် တွေ ကို ကြည့်ပြီး လိုက်လံ ကျင့်ကြံ ဖို့ အတုယူ ခဲ့သူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ ဆန် ဘာနာဒီးနိုး မြို့ မှာ ပစ်ခတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လင်မယားစုံတွဲ ဟာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် ဝါဒထဲ အသိမ်းသွင်း ခံခဲ့ ရနိုင်တယ် ဆိုတာ ဖော်ပြ နေတဲ့ အချက်အလက် တွေ ရရှိ ထားတဲ့ အတွက် အဲဒီ့ အမှု ကို အကြမ်းဖက် ဝါဒ လုပ်ရ
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း ကို ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကတွေ့ရစဉ်Photo: Wai Yan Moe Myint/RFA မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း ထုတ်ပြန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရဘက်က ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိခဲ့ဘူးလို့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘင်ဂျီနာကျွန်းမှာ ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခံထားရတဲ့ မြန်မာရေလုပ်သားတစ်ရာကျော်ဟာ မေလ ၁၅ ရက်နေ့ညက MAI လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိစဉ်Photo: Kyaw Zaw Win/RFA အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ငါးဖမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ကျေးကျွန်သဖွယ် နှိပ်စက်ညင်းပန်းခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးက သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အင်ဒိုနီးရှား တရားရုံးတစ်ခုမှာ မနေ့က ထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အင်ဒို
Posted: 04 Dec 2015 06:34 PM PST
ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ သတင်းစာ ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် Hot News Weekly Vol6No 271 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် အင်အား အားကစား ဂျာနယ် အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၃၃ ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS Journal ( Vol-5No- 87) ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ